KDE ithembisa ukuba ujongano lomsebenzisi wePlasma luza kuphucula kakhulu | Ubunlog
I-KDE ithembisa ukuba ujongano lomsebenzisi wePlasma luza kuphucula kakhulu, kwaye sele beyilungisile ibug ecaphukisayo
Ngaphezulwana kwinyanga ephelileyo, xa babesungula i-beta yokuqala ye- Kubuntu 21.04, Ndazisungula ukuyifaka ngaphandle kokucinga kabini. Inyani yile yokuba kwakungekho kubi kakhulu kum, kodwa bekukho ibug eyazikhathaza kakhulu: xa uthatha umfanekiso-skrini ngokukhetha indawo engunxantathu, sabona isaziso silandelwa ngumyalezo wemposiso, njalo, njalo. Kubonakala ngathi, KDE Sele iyilungisile loo ngxaki, ebikhona kuhlobo oluzinzileyo kodwa iya kunyamalala xa iiNkqubo-sikhokelo 5.82 zikhutshwa.
Yinto uNate Graham aqhubele phambili kuyo inqaku lakho leveki malunga nokuba yintoni entsha eza kwi KDE desktop. Kwaye iPlasma 5.22 iyeza kwaye sele besenza izinto zokugqibela zokuphehlelelwa kwe-beta, kuba imeko yemizobo ikwazisa iinguqulelo zovavanyo. Apha ngezantsi unayo uluhlu olupheleleyo lweenguqu abasebenza kuzo, Kodwa eyona nto indithathele ingqalelo yile bendiyikhankanyile ekuqaleni kwesi sithuba.
Njengemisebenzi emitsha bakhankanye enye eza kuza nePlasma 5.22: kuya kuba nakho ukunciphisa umda wokuphumla kohlaziyo lwenkqubo yokujonga imifanekiso.
Ukulungiswa kwendlela emnyama apho uKonsole anokungqubeka khona xa evula iisetingi zayo (uCarlos Alves, Konsole 21.04.1/XNUMX/XNUMX).
I-Gwenview ayisaphazamiseki kwaye ibuhlungu xa icelwa ukuba ivule uxwebhu olune-mimetype engahambelaniyo nokwandiswa kwegama lefayile (Arjen Hiemstra, Gwenview 21.08).
Ukulungiswa kwendlela apho iPlasma inokutshayisa ngoko nangoko xa ungena xa usebenzisa izinto ezithile kwi-systray, okanye xa utshintsho lwebhodi yezitshixo (Konrad Materka, Plasma 5.22).
Ukucofa iqhosha elithi "Ukulala" xa usebenzisa indlela yokuqalisa yeSystemd kunye nohlobo lwakudala lweSystemd akusavali ikhompyuter endaweni yokuyilalisa (Yaroslav Sidlovsky, Plasma 5.22).
Ukulungiswa kwe-bug enqabileyo enokubangela ukuba i-KRunner ingavuli okanye icime xa icofa indlela yayo emfutshane (iFabian Vogt, iPlasma 5.22).
Xa uxelela i-applet yebhodi eqhotyoshwayo ukuba icace imbali kwaye ibuza ukuba sifuna ukuqhubeka na, ucofa u "Hayi" emva kokujonga ibhokisi ethi "ungaphindi ubuze" ayisaphuli "imbali ecacileyo" ukusebenza ngonaphakade (Bharadwaj Raju, Plasma 5.22) .
Indawo yokutshintsha esetyenzisiweyo ngoku iyabonakala kwigrafu yememori entsha yesicelo sePlasma System Monitor (URavid Redondo, iPlasma 5.22).
Ukuvula ifayile yeflatpakref kwiFumanisa isicelo esele sifakiwe akusekho mpazamo ingaqhelekanga (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.22).
Ukufumanisa akusabonisi "Khipha" iqhosha kumaphepha ohlaziyo apho kungenangqondo (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.22).
Iqhosha lokumisela ukufundwa kwescreen kwiphepha lokufikelela kwiNkqubo yoKhetho ngoku lisebenza ngokwenene (UCarl Schwan, iPlasma 5.22).
Inkqubo ye-kdeinit5 ayisaphazanyiswa ngokungacwangciswanga okanye rhoqo xa izama ukuvelisa izithombisi ngexesha lokusebenza okuqhelekileyo njengokuthatha izikrini, ukukopa iifayile, njl. (IFabian Vogt, iiNkqubo-sikhokelo 5.82).
I-Ark ngoku ibonisa isikrini esamkelekileyo xa sivula ngokuthe ngqo inkqubo ngaphandle kokuyibiza ukuba unzip ifayile. Ubungakanani befestile bufanelekile ngakumbi (Jiří Wolker kunye noNate Graham, iTyeya 21.08).
Ukukhethwa kwesibonakaliso kwinto onokuyikopa emva kokuthatha umfanekiso-skrini (ukuba kukho nantoni na) ucacisiwe ngokucacileyo kwiwindow yezicwangciso, kunye nokuseta ukukopa indlela yefayile kwibhodi eqhotyoshwayo ngoku iyasebenza nokuba i-autosave ikhubazekile (igcina ifayile kwindlela yethutyana) (uSrevin Saju, Ummangaliso 21.08).
Ibha esecaleni yeGwenview ifumene uhlaziyo olubonakalayo ukuze luhambelane ngakumbi nezikhokelo zomsebenzisi zangoku ze-KDE (uNowa Davis, uGwenview 21.08).
Imenyu yeethegi yeDolphin kwimboniselo yokukhangela ngoku ineqhosha elithi "Cacisa uKhetho" ukwenzela ukuba abo basebenzise kakhulu iithegi baqalise ngokulula ukukhangela okusekwe kwithegi (Ismael Asensio, Dolphin 21.08).
Isenzo "Sokucima zonke izaziso" seapplet yezaziso sikhutshiwe kwimenyu yehamburger ukuyenza ifikeleleke ngakumbi, kwaye iqhosha elithi "Qwalasela" le-applet ngoku livula iphepha lezaziso zoKhetho lweNkqubo endaweni yefestile yesaziso. UNate Graham, iPlasma 5.22).
Isaziso se-systray popup ngoku siyavala xa isaziso sokugqibela sicociwe kusetyenziswa amaqhosha asondeleyo kwimbono endaweni yeqhosha "Cima zonke izaziso" (u-Eugene Popov, uPlasma 5.22).
Imenyu yeFonti yokuFumanisa ngoku iyafikeleleka kwaye iyasetyenziswa ngekhibhodi (UCarl Schwan, iPlasma 5.22).
Iphepha leVolumu yeVidiyo yeNkqubo yokuKhetha ayisabonisi useto olungasetyenziswanga nolungasasebenziyo xa inkqubo isebenzisa inkqubo yePipeWire-PulseAudio yokuhambelana (uNicolas Fella, iPlasma 5.22).
Umsebenzi "wokuqaqambisa windows" woMphathi weSebenzi ngoku usebenza kuphela xa isikhombisi sixhonywe ngaphezulu kwe-thumbnail yewindow, eyenza ukuba iluncedo kwaye ingacaphukisi, ngenxa yoko siyenza isebenze ngokungagqibekanga (Bharadwaj Raju, Plasma 5.22).
Iqhosha "Yenza iVault eNtsha" kwi-systray applet ngoku lihlala entlokweni, ukutshatisa ubeko lwezinye ii-applet zesystray (uNate Graham, iPlasma 5.22):
Inkqubo yetreyi yeBhetri kunye nokuqaqamba kweapplet yokubonisa okufumanekileyo kulungiso: iqhosha le "Qwalasela" ngoku livula Ezikhethwayo Ezikhethwayo iphepha endaweni yewindow engenanto yoqwalaselo lwe-applet engenanto, kwaye ekuphela kwendlela esuka kuloo festile ibe yinto ekhethiweyo kwimenyu yehamburger (UNate Graham, iPlasma 5.22).
Ifestile yoKhetho lweNkqubo ayisasebenzi ncinci kakhulu (uNate Graham, iPlasma 5.22).
Irediyo yeekona zemivalo yetayitile ezotywe yi-KWin ngoku iyayihlonipha inqanaba le-X11 (Paul McAuley, Plasma 5.22).
Akusekho ndawo incinci ingenanto kumda osekunene wepaneli engeyiyo eyandisiweyo (Jan Blackquill, IPlasma 5.22).
I-Dolphin Breadcrumbs Bar ngoku ibonisa isicatshulwa esinobuhlobo kwiziphumo zokukhangela (uKai Uwe Broulik, iiNkqubo-sikhokelo 5.83).
Inkqubo yokuKhetha isiKhangeli seKhrawuza iphepha lisusiwe kuba lalingenamsebenzi ngeli xesha (UNicolas Fella, iiNkqubo-sikhokelo 5.83).
Izakhelo ze KDE 5.82 ziya kukhutshwa namhlanje, ke kdeinit5 bug izakulungiswa kungekudala. IPlasma 5.22 iyeza ngoJuni 8, I-KDE Gear 21.04.1 izakufumaneka ukusuka nge-13 kaMeyi kunye ne-20.08pm izakufika ngo-Agasti, kodwa kanye loluphi usuku olungaziwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Iidesika » KDE » I-KDE ithembisa ukuba ujongano lomsebenzisi wePlasma luza kuphucula kakhulu, kwaye sele beyilungisile ibug ecaphukisayo
UZellij, i-terminal multiplexer entsha ebhalwe eRust